I-10 yeNombolo yeFowuni yokuKhangela ngokuSimahla enegama - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-10 NgokuSimahla yokuGqibela ukuKhangela ukuKhangela kweFowuni ngegama (Akukho Ntlawulo)
Ukukhangela ukujonga kwakhona kwifowuni kukuvumela ukuba ubone ukuba ngubani okubizayo ngemizuzwana. Ingaphendula imibuzo ecinezelayo:
Ngaba ujolise kuthengiso lomnxeba okanye umkhonyovu?
Ngaba umntu omthandayo unxibelelana nomntu okrokrelayo?
Ngaba unokumthemba umnini wenombolo yefowuni?
Unokwenza ukubuyela umva kwifowuni ngoncedo lwenkonzo yokujonga inombolo yasimahla. Imarike igcwele ngabo. Ngelishwa, ayizizo zonke ezithembakeleyo, kwaye azisayi kuzisa ulwazi olusebenzayo.
Siqokelele i-10 yomsebenzisi-eqinisekisiweyo, esekwe kakuhle yasimahla yokujonga iifowuni (ngaphandle kwentlawulo) apha. Unokubathemba kunye nolwazi abakuzisela lona.
InyanisoFinder -Iyona Ingcaciso iphambili kubunzulu, iiNgxelo ezichanekileyo
ICocoFinder -Eyona ilungileyo ukuba nobuhlobo bomsebenzisi
Ukujonga kwangoko -Eyona ilungileyo kwiWallet yakho
Intelius -Oyona Mnatha siHlawulekileyo
1. I-TruthFinder-Inikezela ubunzulu bolwazi kunye nokuchaneka
InyanisoFinder ngoku yenye yezona ndawo zithembekileyo zaseMelika -Nokusetyenziswa-kwenombolo yefowuni yasimahla yokukhangela (ngegama) iinkonzo. Iqhuba ngaphezulu kwesigidi se-9 semibuzo inyanga nenyanga. Ishishini lifumene umlinganiso we-A + kwi-BBB, ekunzima ukuyifumana.
Ngelixa unokukwazi ukufumana isilingo sasimahla seTrustFinder kunye nokwenza inombolo yasimahla yokujonga inombolo yefowuni, uhlala ufuna ukuhlawula umrhumo wobulungu ngenyanga. Ixabisa i $ 4.99 ngenyanga enye.
Into Oyifumanayo Kwingxelo yeNyanisoFinder
Ingxelo yokujonga kwakhona yefowuni inikezela ngobutyebi beenkcukacha:
Iinkcukacha zakho: Uza kubona igama lomnxeba, igama lokugqibela, ii-aliases ezaziwayo, kunye nolunye ulwazi olunxulumene noko.
Ulwazi lweendaba ezentlalo: Injini yokukhangela iya kukhangela indawo ezixhaphakileyo kwimithombo yeendaba ukuze ufumane ulwazi. Oku kubandakanya i-Facebook, i-Instagram, kunye ne-Twitter.
Imisebenzi kunye nemfundo: Ngaba umnini wenombolo yomnxeba uqeshiwe? Bafunda phi? Zonke iinkcukacha eziphawulwe kwiirekhodi zoluntu ziya kwabelwana nawe.
Ulwazi lwendawo: Indawo iyakwazi ukwenza indawo ekuyo indawo yomnini wenombolo yefowuni.
Ulwazi lwemvelaphi: Ingxelo yangemva luphawu oluphambili. Inika ukufikelela kuyo yonke into ekwirekhodi yoluntu malunga nalo mntu, ukusuka kwimbali yakhe yolwaphulo-mthetho ukuya kwimeko yezemali.
Ukuba ukubuyela umva akunikezeli ngolwazi oludingayo, ungahlaziya ubulungu obupheleleyo ngolwazi oluthe kratya. Ukuba unqwenela ukukhuphela ingxelo kwifomathi yePDF, kuya kufuneka uhlawule i-2 eyongezelelweyo. Ubulungu obupheleleyo bu malunga ne- $ 30.
Inyaniso yeWebhusayithi yeTrustFinder: www.truthfinder.com/
I-TrueFinder ifumana iLungelo ngokuchanekileyo
a. Ichanekileyo ngokuchanekileyo
Iinkonzo zokujonga ngasemva zinokuthi zichaneke ngokungachanekanga. Kungenxa yokuba batsala ulwazi kwimithombo yoluntu, uninzi lwayo luphelelwe lixesha. Nangona kunjalo, i-TruthFinder ayinangxaki. Le yenye yeenjini ezichanekileyo, ezinokuthenjwa phaya.
b. Amava omsebenzisi alungile
Ukujonga inombolo yefowuni okanye ukufumana ulwazi ngemvelaphi yomntu kulula. Unokwenza ingxelo ngokundwendwela iwebhusayithi, uchwetheze inombolo yefowuni, kwaye wenze iakhawunti. Ayinaxinzelelo kwaye iyakhawuleza.
Ngokuhambelana ne-FCRA (Umthetho oLungileyo wokuRekhoda ngeKhredithi), kukho imida kwindlela kwaye ungayisebenzisa njani kwaye ufumane nini ulwazi olufumene kukhangelo lwefowuni olubuyela umva. Ngokungafaniyo nezinye iisayithi ezinomthunzi, i-TruthFinder iphambili malunga noku. Bacacisa yonke into ngokucacileyo.
a. Ibiza imali
Unokwazi ukufumana isilingo sasimahla seTrustFinder kwaye wenze inombolo yasimahla yokubuyela umva ngaloo ndlela. Nangona kunjalo, izilingo zasimahla zinqabile. I-TrueFinder yinkonzo yeprimiyamu kwaye bakubiza imali eninzi inyanga nenyanga. Oko kuthethiweyo, ungabhalisela inyanga enye kuphela.
b. Ufuna ubulungu
Unokwenza ukubuyela umva kweefowuni ngokujonga ubulungu benyanga nge-4.99 ye-TrueFinder. Okanye ungathenga ubulungu obupheleleyo benyanga (malunga ne- $ 30) yokujonga ngasemva. Akukho ndlela yokuthenga ingxelo nganye, ngelishwa.
Ngokubanzi, i-TrueFinder yinkonzo enkulu kwaye ifumana amanqaku aphezulu apho ibaluleke khona-ulwazi oluchanekileyo.
Cofa apha ukuze uqalise ngophendlo lwakho lokujonga umnxeba kwi-TrueFinder .
2. CocoFinder -Umsebenzisi-onobuhlobo, okhawulezayo, kunye noSimahla
ICocoFinder ilandelayo kuluhlu lwethu. Inika ukukhangela ekubuyiseleni simahla ngokupheleleyo ngokukhangela amagama. Le injini yokukhangela inegama elihle. Ibonakalisiwe ngamajelo eendaba amaninzi athandwayo, kwaye ihlala idunyiswa ngobuhlobo bayo bomsebenzisi.
Njenge-TrueFinder, iCocoFinder yenye yeenkonzo ezinqabileyo ezilawula ukumba idatha efanelekileyo, kunye nokuhlaziywa kwangoku. Batsala uphando lwabo kwizigidigidi zedatha, kubandakanya iirekhodi zikarhulumente kunye nezabanini babucala. Uya kufumana ulwazi olunzulu.
b. Yinto engenamkhawulo yokujonga iifowuni
Ungajonga iinombolo zefowuni simahla. Inkonzo ixhasa amanani asekwe e-US, omabini omhlaba kunye neselfowuni. Wena fumana ulwazi kumsebenzisi wefowuni njengegama labo , iindawo zokuhlala, kunye nendawo yokuhlala yangoku. Unokufuna ingxelo yangasemva yedatha engaphezulu.
c. Imfihlo yakho iqinisekisiwe
Le nkonzo ayilandeli idatha yakho yobuqu okanye ayigcini. Naluphi na ukhangelo olwenzileyo ngeCocoFinder aluzukuchazwa ngokupheleleyo kwaye lukhuselekile. Ngapha koko, ukuba unqwenela, unokunxibelelana nabo kwaye ukhethe ukuphuma kulwazi lwakho olufunyenwe ziinjini yokukhangela.
a. Akukho app mobile
Okwangoku, le nkonzo ayiboneleli ngefowuni ye-Android okanye ye-iOS (i-TrueFinder iyayenza). Nangona kunjalo, khange sicinge ngenene ukuba sisaphuli-mthetho. Indawo ilungiselelwe kakuhle izixhobo zefowuni. Ungafikelela kuwo onke amanqaku ayo kuyo nayiphi na ifowuni encinci okanye ithebhulethi.
b. Uhlawula umrhumo (ofanelekileyo) wolwazi oluphambili
Ukubheka umva kwefowuni kubuyisa isixa esilinganiselweyo solwazi. Ukuba ungathanda iinkcukacha ezithe kratya- njengokujonga imeko yangasemva yomntu- kuya kufuneka uthenge ingxelo ngokwahlukeneyo. Yimali efanelekileyo xa kuthelekiswa nezinye izinto ezifanayo ezifunwayo.
Cofa apha ukhangele inombolo yokubuyela umva ngoku !
3. Ukujonga kwangoko
Ukujonga kwangoko yasekwa ngo-2010. Isekwe ngaphandle kweSan Diego, eCalifornia, kwaye inikezela ngeenkonzo zayo kubantu abangaphezulu kwesigidi kwilizwe liphela. Babe kwiindaba ngezizathu ezingalunganga ngo-2014, ngenxa yokophula i-FCRA. Baye bacoca isenzo sabo kutsha nje, nangona.
Ujongano olusebenzayo lokujonga ujongano lomsebenzisi luyilelwe kakuhle kwaye linomdla. Unokuqhuba ukukhangela kwefowuni okubuyela umva simahla kwimizuzwana, kwaye unolwazi olusezandleni zakho kwimizuzu embalwa elandelayo. Ungangena kwiwebhusayithi nakwesiphi na isixhobo, nokuba yi-PC okanye i-smartphone yakho.
b. Banolingo lweentsuku ezintlanu olunomtsalane
Inkonzo iza novavanyo lweentsuku ezintlanu ohlawula ngalo i $ 1 kuphela. Ngamanye amaxesha bayinikela simahla. Ngokusisiseko, ungabaleka ngokupheleleyo inombolo yasimahla yokubuyisa inombolo yefowuni , Ungasathethi ke ukuzama ezinye iingxelo abazinikelayo- njengokujonga ngasemva.
U-Instant Checkmate ucacisa gca ukuba ungayisebenzisa njani kwaye nini ulwazi olifumana kwiwebhusayithi yabo. Akukho shishini linomthunzi apha (akusekho). Uyakufumana oko ukuhlawulayo, kwaye ube nezikhokelo ezicacileyo zokuba ungayisebenzisi njani le nkcukacha (njengokujonga ingqesho).
Iintsilelo zokujonga kwangoko
a. Iyacotha kancinci
Kuzo zonke iiwebhusayithi esizizamile, uKuqwalaselwa kwangoko kuphakathi kokucotha. Iingxelo zabo zithatha ixesha elide ukuvelisa. Ukuba ufuna ukuvelisa iingxelo ezininzi, kuyakufuneka ulinde ixesha elide nganye nganye.
b. Inkonzo yabathengi ishiya into enqwenelekayo
Inkonzo yabathengi ye-Instant Checkmate ayisiyiyo eyona. Bahlala emva kwexesha ukuphendula. Ukuba ufuna ukuburhoxisa ubulungu, sicebisa ukuba wenze kakuhle ngaphambi komhla wokugqibela. Ngaphandle koko, unokulindela ukuhlawulwa kwakhona kwikhadi lakho.
Yiya kwiwebhusayithi yokujonga kwangoko apha >>
Intelius yenye yezona zidala, ezisekwe Iinkonzo zokujonga ngasemva . Yayisungulwa emva ngo-2003 kwaye isekelwe eWashington. Le nkonzo inophononongo oluxubekileyo, yiyo loo nto ibonakalisiwe ezantsi kuluhlu lwethu.
Ungasebenzisa i-Intelius ukufumana ulwazi nakweyiphi na inombolo esekwe e-US. Ukukhangela kwabo ekujongeni ukukhangela iifowuni ngokuthembekileyo ngokubanzi kunokuthenjwa. Ukuba ufuna ulwazi malunga nomnini wefowuni, kuya kufuneka ukhethe ingxelo yangemva yokujonga.
Bendlela: Inkampani ayisoloko ivelisa ulwazi oluchanekileyo. Kananjalo banokuba ngamaqhinga kancinci malunga namaxabiso, kodwa ayisiyiyo isivumelwano. Ubulungu benkulumbuso buxabisa i-19.95 yeedola ngenyanga, esezantsi.
Jonga i-Intelius apha >>
I-TruePeopleSearch yenye yezona zinto zisimahla zokujonga iselfowni eneenkonzo zegama kwi-intanethi. Bayinkampani entsha ngokuthelekisa, eyasekwa ngonyaka ka-2017. Abantu abasemagunyeni baneminyaka engaphezu kwama-20 abantu befumana amava, nangona kunjalo.
Ungajonga nayiphi na inombolo esekwe e-US ngaphandle kwentlawulo kule webhusayithi. Bangakwazi ukuvula iinkcukacha ezifana negama lomnini, indawo yabo, ii-akhawunti zeendaba zoluntu kunye needilesi ze-imeyile. Kuya kufuneka uhlawulele ingxelo enzulu yangasemva.
Bendlela: Azikho ezininzi iingxaki ngale nkonzo. Abanikezeli ngeenkonzo ezinzulu okanye iingxelo njengezinye iiwebhusayithi. Ukutshekisha imvelaphi epheleleyo kunye nenketho yembali yolwaphulo-mthetho, umzekelo, ayikho kwindawo yabo. Kananjalo abanayo iapp ye-iOS.
I-SpyDialer yenye yeenkonzo zokujonga iinombolo zasimahla ezinesidima. Kubonakele kumajelo osasazo afana neFox News, iMen's Journal, kunye neWiki How. Yayisungulwa ngumphandi wabucala owaziwayo kunye nombhali, uGriffin W.
Nge-SpyDialer, ungenza ukukhangela kwinombolo yefowuni yokubuyisela umva ngosuku simahla. Ixhasa onke amanani asekwe e-US, amisiweyo kunye neselfowuni. Banikezela ngolwazi olufana neenkcukacha zomnini kunye nemifanekiso ekhoyo. Ukuba inombolo ine-voicemail, uSpyDialer uyakuyidlala.
Bendlela: Indawo ikuvumela ukuba uvelise iingxelo ezinzulu kodwa kuphela xa ubhatalela- $ 20 ngenyanga. Ngapha koko, ikunika ukhetho lokurhweba kwincwadi yakho yedilesi yokukhangela simahla kwe-100. Ayisiyonto esinokuyicebisa.
ZabaSearch yinkampani esekwe ngaphandle kweSalinas, California. Baye bahlala okwexeshana kwaye banegama elihle ngokubanzi. Isebenzisa ukubonelela ngenkonzo yokujonga iifowuni simahla ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ngoku iba yiprimiyamu.
Ungalindela ntoni kwiZabaSearch? Bayakuvumela ukuba ukhangele iinombolo ezili-10 zase-US mahala. Ngaphandle kokubuyela umva, inkonzo ixhasa abantu, indawo, ikhowudi ye-ZIP, kunye nokujonga idilesi. Iwebhusayithi yabo yenzelwe kakuhle kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Bendlela: I-ZabaSearch inxibelelana ne-Intelius, enezinto ezilungileyo nezingalunganga. Ngapha koko, ukujonga inombolo yefowuni ngoku yinkonzo yeprimiyamu. Ulwazi olufumanayo luthembekile ngokubanzi, kodwa uyakufuna ingxelo eqhubekekayo yedatha eluncedo ngokwenene.
I-ZoSearch yindawo yokukhangela yabantu yasimahla. Inkampani idibene nabathengisi bolwazi abaziwayo. Ngapha koko, banokujonga iibhiliyoni zeerekhodi zikawonke-wonke ukuzisa ulwazi olufunayo. I-ZoSearch iyafumaneka kwii-PCs nakwii-smartphones.
Uya kufumana idatha kwiinkcukacha zomnini wefowuni, kubandakanya amagama akhoyo, iidilesi ze-imeyile, kunye nemidiya yoluntu. Inkonzo ikwabonelela ngeengxelo ezinzulu zemvelaphi yomrhumo. Inombolo yokujonga inombolo isimahla.
Bendlela: Inkonzo ayinayo usetyenziso lweselfowuni, olunokubuyela umva kancinci. Ukongeza, kuya kufuneka uhlawule ukuze ufumane idatha enexabiso (oku kuyinyani kubo bonke abantu abakhangela iinjini).
9. Amaphepha amhlophe
Amaphepha amhlophe yenye yezona ndawo zidumileyo zokukhangela kunye neenombolo zokujonga iinombolo zomnxeba kwiplanethi. Sele ikho phantse ixesha elide njenge-intanethi- 1997- kwaye ihlala inikezela ngedatha eqinileyo. Isetyenziswa ngabantu abazizigidi ezingama-35 ngenyanga.
Banikezela ngeenkonzo ezahlukeneyo. Ngaphandle kokujonga umva ngefowuni, ungaqhuba uphando kwiwebhusayithi- umzekelo, imbali yokuchaphazeleka, iinombolo zeselfowuni, iinkcukacha zonxibelelwano kunye neerekhodi zolwaphulo-mthetho. Banikezela ngenkonzo yokujonga indawo yokuhlala eyahlukileyo (qiniseka ukunamathela kwi-FCRA).
Umxhasi: Amaphepha amhlophe anenqanaba leBBB le-B, elingelilo elona lifanelekileyo, kodwa hayi elona libi kakhulu. Inkonzo ikuhlawulisa ngaphezulu kwe- $ 29 ngenyanga ngeengxelo / ngolwazi oluphambili. Yonke imibuzo eyongezelelweyo ixabisa i $ 18.95, engabizi kakhulu.
USpokeo ebekubo bantu bakhangela ishishini ngaphezulu kweminyaka eli-14. Ziyenye yeenjini ezinkulu kwi-intanethi. Banamaofisi eCalifornia, kunye nenqanaba leBBB le-A +. USpokeo kutshanje ebesezindabeni zokuthatha uninzi lokhuphiswano.
NgeSpokeo, unokulindela iingxelo ezichanekileyo ngexesha elikhawulezayo. Bakunika ulwazi lomntu siqu, iirekhodi zedilesi kunye nolunye ulwazi olufumanekayo eluntwini. Unokulandela nayiphi na inombolo esekwe e-US ngaphandle kwengxaki.
Bendlela: Ngaphandle kokuba kukho isilingo sasimahla ekunikezelweni, uSpokeo uyabiza. Uhlawula i- $ 13.95 yokukhangela i-100 ngenyanga. Ukuba ufuna ingxelo eyodwa, ixabisa i $ 49.95, ebiza kakhulu ngeenkwenkwezi. Izinketho zokubhalisela zitshiphu.
Unokufumana inombolo yokukhangela yasimahla kwiinkonzo esele sizikhankanyile kwiimvavanyo zasimahla. Ezinye zazo zikhululekile ngokupheleleyo. Sincoma ukunamathela kumangeniso ambalwa okuqala kwiziphumo ezilungileyo-ezi nkonzo zinegama elihle kwaye zinikezela ngedatha echanekileyo amaxesha angama-9 kwali-10.
Ukufumana inombolo yasimahla yokujonga inombolo yefowuni akunakwenzeka ngo-2021. Uninzi lweenkonzo ezinjalo ziye zacinywa. Ukufumana idatha kwi-broker yolwazi okanye kumasipala wengingqi kubiza imali. Ke, ngaphandle kokuba bubutsotsi, kuya kufuneka uhlawule imali efanelekileyo yolwazi.
UTesla uthi Imodeli yakhe yesi-3 yeyona moto ikhuselekileyo yakha yakhiwa- kodwa abalawuli abayi kuvuma
Kumnandi ukonwatyiswa: ‘Izono ezisixhenxe eziBulalayo’ kwiSithili seNyama
'Ilifa' yinto eyoyikisayo 'iParasite' kunye 'nokuLandelana' uWannabe
Ungayifumana njani imvelaphi yokujonga umntu
ezona ndawo zokuthandana ze-lgbt
emva kwexesha amanqaku e-tv ngo-2017
liphuma nini ixesha le-9 lokungabi nazintloni
Ndifuna usuku ngokuhlwanje
imibuzo efanelekileyo yokubuza oluphakathi